Labada tiir ee ugu weyn ciyaaraha kubada cagta Isbaanishka oo lagu dhuftay dharbaaxo xoog leh… – Hagaag.com
Posted on 18 Oktoobar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Labada tiir ee ugu weynaa kubada cagta Isbaanishka ayaa lagu dhuftay dharbaaxo xoog leh todobaad uun ka hor kulanka soo socda ee dhex mari doona kulankooda (El Clasico) ee horyaalka Spain, madaama laga badiyay kulankoodii Sabtidii ee wareega lixaad ee horyaalka La Liga.
Dhowr saacadood ka dib markii kooxda Cadiz oo ay u soo gudubtay Qeybta Koowaad ee Spain xilli ciyaareedkan ay dharbaaxo kulul ku dhuftay kooxda Real Madrid, oo ah kooxda difaacaneysa koobka, waxayna gurigooda uga badisay 1-0, dhinaca kale Barcelona ayaa iyaduna looga badiyey isla natiijadaasi ciyaar dhex martay Getafe, taasi ayaa ku noqotay labada kooxood naxdin xoog badan ka hor inta aysan bilaabin tartamada toddobaadkan ee heerka guruubyada ee tartanka UEFA Champions League.
Barcelona ayaa iska lumisay fursad dahabi ah oo ay hogaanka kala horeynta ku qaban kartay ka hor kulanka El Clásico waxayna ku dhacday kooxda martida loo ahaa ee Getafe oo gool u dhaliyey Jaime Mata oo ahaa rigoore daqiiqadii 57 aad, dhibcaha Barcelona ayaa ku joogsaday 7 dhibcood. Halka Getafe uu sare u kacay dhibcahooda oo gaaray 10 dhibcood, waxayna ku jirtaa kaalinta labaad ee kala horeynta iyada oo Real Madrid ay ku hogaamineyso farqiga goolasha oo keliya. sidoo kale waxaa isla dhibcahaasi leh kooxaha Cadiz iyo Granada.
Dhamaan isku dayadii Barcelona ayaa ku dhamaaday guul darro, in kasta oo ay ciyaartu is bedeshay markii bedel ku soo galay laacibka da’da yar Ansu Fati bartamihii qeybtii labaad.
Guuldaradu waxay dhabar jab weyn ku tahay niyadda Barcelona ka hor inta aysan bilaabin wareega group-yada ee koobka horyaalada Yurub oo ay la ciyaarayaan kooxda Hungary ee Ferencvaros Talaadada soo socota.